I-china 3030 lattice led strip abakhiqizi nabaphakeli | Huayuemei
Into Ikhethini le-LED Strip
I-LED Qty 6PCS
Amandla 5.4w / ama-PC
I-Curtain LED Strip inikeza ama-substrate we-point-to-point elula ashubisa mahhala afinyelela kuma-500 lbs wokukhanyisa okufananayo okuhle
ICurtain LED Strip inikeza ukukhanyisa okufanayo, ukugwema izindawo ezishisayo. Uhlelo ludinga i-voltage ephansi futhi lisebenzisa amandla angaphansi kwama-60%, uma kuqhathaniswa nolunye uhlelo
ISIKHATHI SEBHODI LESIKHATHI
I-Curtain LED Strip ingenziwa ngokwenza ngezifiso iphimbo phakathi kwamabhodi e-LED ngokuya ngempahla ye-diffuser, ukubuyela emuva nezidingo zokukhishwa kwe-lumen
Amabhodi ethu e-LED angaba ngohlangothi olulodwa noma emaceleni amabili ngomehluko omncane kuzindleko. Ilungele ukufakwa kophahla, ukufakwa odongeni nxazonke
Ukufuna amathuluzi ambalwa futhi kungabi buchwepheshe, iCurtain LED Strip ingavinjelwa kalula futhi yenziwe ngezifiso kunoma yisiphi isayizi noma ukwakheka
Ngama-gramu angama-70 ngonyawo wesikwele, i-Curtain LED Strip ayidingi ukuqiniswa okukhethekile
1. I-Curtain LED Strip ithole uhlelo lwe-CE ne-UL oluqinisekisiwe lokukhanyisa i-LED olukhiqiza ukukhanya okufanayo. ICurtain LED Strip ingakhanyisa ngobuningi bama-diffusers nezinto zokwenziwa kwezicelo eziningi nokuhlanganiswa kwezakhiwo.
2.Color lokushisa, CRI, Usayizi kungenziwa egcizelele ngokuvumelana nesicelo sakho. Kungaba dimmable nge isilawuli.
Ukukhanya kwe-Uniform nokuhlanganiswa kwe-Architectural kuhambisana neCurtain LED Strip.
4 .. Samukela i-OEM ne-ODM ngokuya ngesicelo sakho.
5. Nikeza ngezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme nezisezingeni eliphezulu ngemuva kokuthengisa.
6.Color lokushisa kungenziwa egcizelele isicelo sakho (2800-12000K).
7. Iwaranti yiminyaka emithathu. Lokushisa Ukusebenza kuyinto -50 ℃ ~ 50 ℃.
Imingcele yokukhanyisa enikeziwe iqinisekisa ukukhanya phezulu. Ngokuya ngohlobo lwezinto ezisetshenziselwa izinhlamvu zesiteshi noma amabhokisi okukhanyisa, amapharamitha angashintsha.Ukukhanya okukhulu kutholakala uma amabanga aphakathi kwamamojula we-LED ancishisiwe.
2. Imodyuli ye-LED uqobo kanye nazo zonke izinto zayo kungenzeka kungacindezelwa ngomshini.
3. Sicela uqinisekise ukuthi ukunikezwa kwamandla kungamandla awanele okuqhuba umthwalo ophelele. Abasebenzi abaqeqeshiwe kuphela okufanele bavunyelwe ukwenza ukufaka.
4. Ukwakhiwa kwezindlu kufanele kube ngokwamazinga we-IP esicelweni.
Uma isakhiwo sokuvikela ukuqhuma singekho ngaphakathi komhlinzeki wamandla, isivikeli esikhanyayo kufanele sidingeke ngokwengeziwe.
Langaphambilini I-IP67 kwesihenqo siholele ukukhanya komugqa
Olandelayo: Ukukhanya kwe-SMD5050 okungamanzi okungamanzi kwebhokisi lendwangu elikhanyayo
Iphaneli eholelekile yangemuva yombala owodwa
I-RGBW Flexible LED Backlight Panel
Imodyuli eholele emuva